पाथिभरा देवीको दर्शन गरी आज साउन २९ गते शुक्रबार,कस्तो रहला तपाईको दिन हेर्नुहोस् ? हेर्नुहोस् राशिफल ! - dautarimedia.com
पाथिभरा देवीको दर्शन गरी आज साउन २९ गते शुक्रबार,कस्तो रहला तपाईको दिन हेर्नुहोस् ? हेर्नुहोस् राशिफल !
आर्थिक र व्यावसायिक दृष्टिले दिन लाभदायक छ । व्यवसायको लागि योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। परोपकारको उद्देश्यले गरिएको कार्यले मन प्रफुल्लित हुनेछ। आर्थिक लाभको आशा राख्न सक्नुहुन्छ । बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार प्रतित हुनेछ ।
अत्यधिक भावनाशीलले तपाईको मनलाई संवेदनशील बनाउनेछ । विशेष रुपले जलाशय र स्त्रीवर्गबाट सचेत रहनु पर्नेछ । आमाको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्ता रहनेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य खराब होला ।
निषेधात्मक कार्य र नकारात्मक विचारबाट टाढा रहनुहोला। झगडा वा विवादबाट बच्नुहोला। पारिवारिक वातावरण कलुषित होला । आर्थिक समस्या अनुभव होला । भगवानको स्मरण र आध्यात्मिकताले मानसिक बोझ हल्का होला ।
दैनिक कार्यबाट बाहिर निक्लेर घुमफिरमा दिन बिताउनुहुनेछ । आफन्त तथा मित्रसँग पिकनिकमा जान सक्नुहुन्छ । सिनेमा, नाटक वा बाहर भोजन गर्नको लागि शुभ दिन छ । व्यवसायमा सहयोगीको सहयोग प्राप्त होला । दांपत्यजीवनमा अधिक निकटता स्थापित हुन सक्ला ।
Previous: श्रीमतीलाई अ’त्यन्तै माया गर्छन् यी चार राशी भएका पु’रुषहरुले
Next: प्रचण्डलाई आलु कोसेली ? कोसेली दिनुमा ठूलो कारण लुकेको छ